6 BADI KHALADAADKA INTA BADAN EE KU SAABSAN HOYGA IYO DIYAARINTA QABOOJINNADA JIILAALKA - WARARKA
Marka koritaanka-aadanku ku koraan hareeraha dhexe ee xilliga dayrta, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo dalagyada ubaxa ee xilliga jiilaalka. Laakiin tani waa in la sameeyaa sida ugu saxsan ee suurtogalka ah, ka dib talooyinka xirfadlayaasha qibrada leh. Si kastaba ha ahaatee, bannaanka u badan inta badan khalad sameeyo.
Dadku waxay si khalad ah u adeegsadeen sheekooyin caadi ah oo ku saabsan diyaarinta aabaha xilliga qaboobaha.. Sidaa darteed, waxaa jira fikrado ah in dhirta dayrta waa in la gooyaa gaaban, quudiyo oo keliya potassium iyo fosfooraska, spud.
Sidoo kale waa qalad si aad u maleyneyso in caleemaha dhufanayadu aad u kulul yihiin, iyo laamood caleemaha waa rinjiyeynta ugu fiican. Intaa waxaa dheer, wax walba, beerta hiwaayadda, ka dib talooyin been ah, inta badan sameeyaan waxyaabo khalad ah xitaa geedi socodka dhismaha hoy. Waxaa jira 6 ka mid ah fikradaha ugu caansan ee caanka ah, kuwaas oo laga wada hadli doono.
Muujintii 1aad: Xadgudubka Dhimista ee Geedaha Ka hor Hoyga
Ka hor inta la gooyo caleemaha dhufashada dhererkoodu yahay 20 ilaa 30 sentimitir, bannaanka iyo beeraha badankood waa in ay ku qancaan baahida loo qabo dhirta noocyo kala duwan ay ku jiraan goobtaada.
Si aad u diyaariso habkan loogu talagalay qabowga waxaa lagula talin karaa kaliya shubanka shaaha ah ee shiidan, iyo sidoo kale kuwa ka tirsan kooxda floribunda. Haddii, si kastaba ha noqotee, in la gooyo cirbadaha, burooyinkeeda iyo burqada, kuwani waxay si weyn u xuujin karaan kobcintooda sanadka soo socda, ilaa iyo inta ayan wax tareynin.
Haddii awood u lahaanshaha si sax ah loo go'aamiyo kala duwanaansho la'aanta, waxaa fiican in laga tago qorraxda aan la gudin.. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu talinayaa oo kaliya in laga saaro dhammaan burooyinkeeda iyo caleemaha, iyo ka hor inta aanad u daboolin si aad u leexiso caleemaha dhulka.
Ma aha lagama maarmaan in la gooyo iyo caleemaha ka muuqda duurka ee xilliga dayrta diiran, maadaama ay awoodi doonaan inay ku farxaan mustaqbalka leh ubaxyo qurux badan. Waxaa lagama maarmaan ah in la gaabiyo caleemaha sida guga, taas oo ah kicinta loogu talagalay baraaruga ee buro ku yaal qaybta hoose ee geedka.
Kharribaad 2: Dabayshu waa ka sii fiican tahay
Ilaalinta qaboojinta marka la eego ilaalinta kuleylka waa lakabka hawada, laakiin maaha wax waliba oo loo isticmaalo xakamaynta. Barafku sidoo kale wuxuu u adeegi karaa rinjiyaal aad u fiican.
Sidaa awgeed, daboolka ugu wanaagsan ee loogu talagalay inanku waa shaxan ka samaysan kabadhada, qashinka, sanduuqyada cufan ee balaastikada ah ama, tusaale ahaan, sanduuqyada dufcada leh ee dusha sare leh, oo kor ku xajistay qiyaasta 60 g / m2.
Khariidadda 3: Kalamamka iyo fosfooraska oo keliya ayaa loo isticmaalaa dharka ugu sarreeya
Si loo hagaajiyo difaacidda dhirta xilliga jiilaalka, waa inaysan helin kaliya fosfooraska iyo potassium. Roses inta lagu jiro xilliga qaboobaha waxaa kale oo loo baahan yahay kalsiyum, magnesium iyo waxyaabo kale oo waxtar leh. Laakiin waxa ay tahay in aanay ku jirin Bacriminta waa nitrogen. Si kastaba ha noqotee, dhar xidhis la'aantu ma dhicin dhismaha hoy ku haboon.
Kharribaad 4: Caleemaha waa mid aad ufiican oo ay u fududahay inaad ku dhufato dhulka.
Xaqiiqdii, hal tallaabo ayaa hoos u jajabiyey caleemaha dhulka ee hambalyada ma aha mid aad u fudud. Sidaas darteed waad dhaawici kartaa. Sidaa darteed, dib u dhigista caleemaha qafiska ilaa dayrta dambe maaha mid u qalma.: waxaa lagula talinayaa in si tartiib tartiib ah hoos loogu dhigo loona ilaaliyo laan ka fogaado dhulka ilaa dhamaadka Sebtembar. Sidaa darteed, by daqiiqad ah hoyga caws buu horay u gaari doonaa dhulka.
Waa muhiim! Heerka ugu sarreeya ee dabacsanaanta caleemaha kacsan ayaa gaaraya inta lagu jiro maalinta cimilada diiran. Waqtigaas oo kale, way ka fiicnaanaysaa in ay ku dhejiso iyaga oo aan ka baqin jebinta.
Sheekada 5: Hilling Required
Ka shaqeynta hilling ma aha oo kaliya faa'iidooyinka, laakiin sidoo kale qaar khasaare ah. Haddii uu jiro dabacsanaan, hoose ee baadiyaha ayaa kor u qaadi kara, iyo sababtoo ah dhaxan ee ku dhuftey barafka, waxay karsan kartaa.
Sababtan awgeed, waxaa khasab ku ah in ay kufaraan oo kaliya dhalashada dalal dhalashada oo koray laga bilaabo gooyn, tan iyo nidaamkooda xidid waa mid aan xasilloonayn heerkulka hooseeyo.
Xannaanooyinka khaaska ah waxaad ka iibsan kartaa geedo taas oo shubanka lagu tallaalay on duurjoogta.. Dhirta noocan ah waxay awoodaan in ay u dulqaado qabow si aad u wanaagsan, sidaa darteed waxaad diidi kartaa ka soo hoygooda.
Laakiin hal dhibic muhiim ah waa in la tixgeliyaa: haddii beeritaanka lagu fuliyay qoto dheer oo qotodheer ah, iyo meeshii loo yaqaan "grafting site" ay u muuqatay in ay ka sarreyso heerka dhulka, dhirta ayaa si fiican u roon. Ujeedooyinkaas, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo substrate ka kooban ciidda beerta, peat iyo ciid.
Sifaha 6: qalabka ugu fiican ee hoyga - lapnik
Waxaa suurtagal ah in aysan adkaan doonin in geed lapnik ah qadarka saxda ah lagu qaado si loo ilaaliyo lamaanaha ama saddexda duurka. Haddii ay jiraan tiro dhir ah oo ku yaal goobta, tani waxay noqon kartaa dhibaato aan la xalin. Xaaladdan oo kale, waxaa jira baahi loo qabo in la aado keynta iyo wax ka waydiiso geedo la qorsheeyay oo geedo ah, taas oo laga heli karo geedo aan loo baahnayn. Falal aan sharciga waafaqsanayn ayaa leh ganaax.
Waxaad iska ilaalin kartaa cilladaas oo kale adoo iibsanaya spunbond ama ruberoid. Laga soo bilaabo isticmaalka filim caag ah wuxuu ka wanaagsan yahay diidmada, sababtoo ah waxay jabineysaa hawada iyo isdhaafka qoyaanka.
Habka ugu saxsan ee loogu diyaar garoobo soo noqnoqda xilliga jiilaalka iyo kuleylintooda waa xulashada ugu fiican si ay u ilaaliyaan caafimaadka ilaa guga. Isticmaal alaab kaliya oo lagu taliyey hoyga., ka hor inta la gooyay caleemaha, go'aamiyaan nooca dhirta, isticmaal kalsiyum, magnesium, fosfooraska, potassium sida Bacriminta, diidaya in ay dalbato nitrogen.
Sidoo kale waa inaad ogaataa haddii hilling uu noqon karo wax faa'iido leh. Xusuusnow: iimaanka indho la'aanta ah ee khuraafaadka ah - kaliya khasaare ku ah dhufaysyada goobtaada.